I-Honor V20 ifumana uhlaziyo olutsha lwe-UI 2.1 yohlaziyo | I-Androidsis
Imbeko kusungulwa i uhlaziyo olutsha lweflegi Imbeko V20 ngezinye izinto ezintsha kunye nokulungiswa. Yi le Umlingo we-UI 2.1 kwaye, njengoko abanye bekulindelekile, iza nomhlanganisi weTyeya. Nangona kunjalo, i-GPU Turbo 3.0 isalahlekile.
Uhlaziyo nalo ilungisa imiba ethile yekhamera kwaye isebenzise umboniso wayo ukunciphisa ukuchukumisa okungeyonyani, njengoko kuchaziwe.
U-Huawei ubhengeze Umhlanganisi weTyeya kwinyanga ephelileyo ngenjongo yokuphucula ukusebenza, ukutyibilika nokuphendula kwezixhobo. Izisa ukufudumala kwizicelo kwaye iyabanceda ukuba banikeze ngokukhawuleza okukhulu. Ikwenza ukuba kube lula ukuqhuba nokutolika kwinkqubo yokwakha ye-Android.
Imbeko V20, aka Jonga 20
Umhlanganisi wenqanawa uphucula ubuciko nge-24%, impendulo ngama-44% kwaye iphucula ukusebenza kwezicelo zomntu wesithathu ngama-60%. Kwelinye icala, iyakhawuleza kuneMashal Virtual Machine.
Ngomntu ngamnye, Itekhnoloji ephucukileyo eya kuthi ibonelele ukomelela kwizixhobo zeHuawei. Imbeko V20 kunye Hlonipha iMicrosoft 2 Ndingayifumana I-GPU Turbo 3.0 kunye nohlaziyo loMlingo UI 2.1, leyo le sithetha ngayo, kodwa ibonakele ngokungabikho kwayo kwi-firmware entsha.
I-GPU Turbo 3.0 yazisa ngenkqubela phambili entsha, kubandakanya inqanaba eliphezulu lesakhelo kunye nohlengahlengiso lomfanekiso we-AI. Ukusetyenziswa kwamandla kuncitshisiwe nge-10% kwaye ngoku kukho imidlalo engama-XNUMX ehambelana nale teknoloji yokusebenza, xa kuthelekiswa neyesithandathu yokuqala.
Imbeko ye-Honor 20 sele isungulwe ngokusesikweni eSpain
Ngakolunye uhlangothi, Imbeko yongeze indawo yokhuseleko kaMeyi ka-May ukuphucula ukhuseleko kwesixhobo.. Uhlaziyo lunobunzima be-362 MB. Ngoku iyenziwa e-China, kodwa kungekudala izokwanda kwihlabathi liphela kuzo zonke iinguqulelo zayo, njengoko abasebenzisi belindele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Honor V20 ifumana iKhomputha yokuDibanisa kunye noMlingo oMtsha we-UI 2.1
I-Durango: Amazwe asendle kukusinda okukhulu kwedinosaur MMO ngenkululeko enkulu yokwenza